Kheladi - सहाराका ‘अजित’
कसैको मुखै छुच्चो । मनमा लागेको कुरा भनिहाल्नुपर्ने । कसैको अहित चिताएर होइन, तैपनि सिधा बोल्नेलाई कसले मन पराउनु ? साँचो कुरा बोल्दा पनि धेरैको आँखाको तारो बनिरहनुपर्ने ।
सानो छँदा अजितले सुनेका थिए, ‘प्रस्ट वक्ता सुखी भव:’ अर्थात सिधा कुरा बोल्ने मानिस सुखी हुन्छ । तर यो श्लोक अचेल धेरैको जीवनमा लागू हुँदैन । आलोचना कसैलाई मनपर्दैन । तब प्रशंसाबाट खुसी नहुने को होलान् र ?
प्रस्ट बोल्ने बानीले अजितबाट धेरैका लागि अप्रिय कुरा बोलायो । जसको मूल्य उनी चुकाइरहेका छन्, जीवनका सबै व्यक्तिगत र व्यावसायिक पक्षमा । कमसेकम उनलाई त्यस्तै लाग्छ ।
यी त सब उनका गुनासा न हुन् । तर, नेपाली फुटबलले आस गरेका शीर्ष रक्षकहरूको सूचीमा अटाउन सफल अजितको जीवनमा उपलब्धिका शृंखला पनि कम छैनन् ।
पोखरा रंगशाला आहा–रारा गोल्डकप फुटबलको २०औं संस्करण आयोजना गर्ने तयारीमा मस्त छ । आहा–राराको आयोजक सहारा क्लबद्वारा सञ्चालित एकेडेमीबाट उत्पादित अजितको करियरमा अहिले सफलताकै चर्चा सान्दर्भिक होला ।
सहारा क्लबले अनाथ, असहाय र आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई फुटबल र शिक्षामार्फत देशको सक्षम नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ५० को दशकको अन्त्यतिर एकेडेमी खोलेको थियो ।
राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान अनिल गुरुङ त्यही एकेडेमीका पहिलो ब्याचका खेलाडी हुन् । अजित चाहिँ २०६२ सालमा १४ वर्षको उमेरमा सहारा एकेडेमी छिरेका थिए । सहारा एकेडेमीबाट हुर्केको उनीभित्रको फुटबल प्रतिभाले अहिले राष्ट्रिय खेलाडीको पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ ।
नेपाल प्रहरीको नेपाल पुलिस क्लबबाट व्यावसायिक करियर अगाडि बढाइरहेका अजितसामु जारी सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा आफ्नो टिमलाई राम्रो पोजिसनमा पुर्याउने जिम्मेवारी छ ।
आधुनिककालको लिगमा सायद यसपालिको टोली पुलिसको सबैभन्दा कमजोर टोली हो । त्यसमाथि चोटका कारण भरपर्दा रक्षक रविन श्रेष्ठ अझै मैदानबाहिर छन् । यही कारण अजितमाथिको जिम्मेवारी थप बढेको छ ।
लिग जिम्मेवारीले अजितमाथि दबाब पक्कै छ । तर त्योभन्दा बढी उनलाई अहिले आफू हुर्केको पोखरा रंगशालामा हुन लागेको आहा–रारा गोल्डकप खेल्ने र पुलिसलाई उपाधि जिताउने धोकोले उत्साहित बनाएको छ ।
१४ वर्षकै उमेरमा सहारा पुगेका अजितले चार वर्ष त्यही एकेडेमीमा बिताए । त्यसक्रममा १६ वर्षमै सहाराको पहिलो रोजाइको टिमबाट उनी मोफसलका प्रतियोगिताहरू खेल्न योग्य भइसकेका थिए ।
२०६५ सालको आहा–रारा गोल्डकपमा १७ वर्षका अजितले आयोजक सहाराको पहिलो रोजाइबाट प्रतिस्पर्धा गरे । करियरमा त्यो उनका लागि सबैभन्दा सुखद मोड थियो । त्यही प्रतियोगितापछि शीर्ष डिभिजनको लिगमा उनलाई सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफलगायतका टिमबाट प्रस्ताव आयो ।
जतिबेला सहारामा उनको फुटबल सीप तिखारेका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ बौद्ध फुटबल क्लबमा थिए । त्यसैले अरू क्लबबाट प्रस्ताव आए पनि अजितलाई लिग खेल्न बौद्ध नै सही रोजाइ लाग्यो । २०६८ सालमा दुई वर्षको लागि बौद्धसँग सम्झौता गर्दै उनले शीर्ष डिभिजनको यात्रा थाले । सम्झौताको दोस्रो वर्ष २०६९ को लिग बीचमा चलिरहँदा अजित बौद्धबाट नेपाल पुलिस क्लबतिर हानिए । बौद्धले भने त्यही सिजन शीर्ष डिभिजनको हैसियत गुमायो ।
नेपाल पुलिस क्लब त्यतिबेला अहिलेजस्तो संघर्षरत थिएन । हरि खड्का, रमेश बुढाथोकी, पर्वत पाण्डे, अनन्तराज थापा ( हालका प्रशिक्षक), राकेश श्रेष्ठ, सुमन सुवेदी, जुमनु राई, भोलानाथ सिलवाल, दीपक पौडेल, दीपेन्द्र पौडेल, रितेश थापाजस्ता स्टार खेलाडीले सजिसजाउ टोलीबाट फुटबल खेल्ने र सँगै जागिरे जीवन पनि भएपछि के चाहियो र ? अजितलाई यस्तै लाग्थ्यो । अहिले उनी पुलिस खेलाडी बनेको ९ वर्ष भइसकेको छ ।
यसबीच पुलिसले लिग उपाधि जित्न नसके पनि अजितसहितको टोली मोफसलका थुप्रै नकआउट प्रतियोगितामा च्याम्पियन भइसकेको छ । अजितहरूको पुलिसले बुढासुब्बा गोल्डकप, आहा–रारा गोल्डकप, खप्तड गोल्डकप र इटहरी गोल्डकपको उपाधि उचालिसकेको छ ।
सामुदायिक क्लबले ठूलो पारिश्रमिकमा स्टार खेलाडी भिर्याएर टिम बलियो बनाइरहँदा पुलिस भने पुरानै शैलीमा घिस्रिइरहेको छ । त्यसैले अजितजस्ता खेलाडीमाथि टोलीको महारथी छवि जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
यही जिम्मेवारीसँगै आहा–राराको उत्साहले माघ महिनामा पुलिसलाई अर्को उपाधि दिलाउने अजितको योजना छ ।
‘अहिले जे छु, जति छु सहारा क्लबकै कारण हो । एकेडेमीले अहिलेको अवस्थाका कमाउने बाटो बनाइदियो । देशको जर्सी लगाएर प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छु,’ २८ वर्षे अजित एकेडेमी खेलाडी हुनुमा गर्व गर्छन्, ‘अहिले बाबा त हुनुहुन्न । एकेडेमीमा हुँदा बाबा पनि काम सकेर खेल हेर्न आउनु हुँदोरहेछ । तर कहिल्यै पनि आउँछु भन्नुभएन । खेलका क्रममा टोपी हल्लाउँदै बोलाउनु हुँदोरहेछ । त्यत्रो दर्शकको हुलमा देख्दिनँ थिएँ । तर घर गएपछि खेलको वर्णन गर्ने, मैले तेरो खेल हेरें नि ? मैले बोलाएको पनि सुनिनस् भन्नुहुन्थ्यो ।’
बाबा र सहारा क्लबका कारण पोखरा रंगशालासँगको साइनो थप भावनात्मक बनेको अजित सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘त्यो रंगशालामा सधंै मैदान उत्रिँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ । त्यसैले कहिले आहा–रारा गोल्डकप होला भन्ने लागिरहन्छ । पुलिस टोलीबाट यसपालि फेरि उपाधि जित्ने लक्ष्य बनाएको छु । मलाई आहा–राराका लागि पोखरा रंगशालामा मैदान उत्रिने प्रतीक्षाले व्यग्र बनाइरहन्छ ।’
पुलिस क्लब आहा–रारा गोल्डकपमा पाँच पटक उपाधि जित्न सफल टोली हो । तर पुलिसले पोखरामा स्थानीय समर्थकबाट कमैमात्र साथ पाउने गरेको थियो । पछिल्लो समय अजित पुलिस आएपछि भने दृश्य फेरिन थालेको छ । पोखरामा सर्वाधिक सफल मनाङ मस्र्याङ्दी र थ्री स्टार क्लबको मात्रै नभएर पुलिसको पनि समर्थक बढेका छन् ।
‘पुलिसको पोखरामा फ्यान थिएनन् । मेरा साथीहरू पनि मनाङ र थ्री स्टारलाई समर्थन गर्छन् । तर, म खेल्दा यताका मान्छेले पुलिसको समर्थन गर्न थालेका छन् । अहिले पुलिसका समर्थक बढ्न थालेको छ । मेरा लागि त पोखरामा खेल्दा पारिवारिक माहोल हुन्छ,’ अजित भन्छन् ।
राष्ट्रिय टिमसम्मको यात्रा
अजितले उमेर समूहबाट कहिल्यै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएनन् । सहाराबाट बौद्ध पुगेलगत्तै उनले युवा राष्ट्रिय टोलीको निम्तो पाएका थिए । तर, बंगलादेशमा हुने भनिएको १९ वर्षमुनिको साफ च्याम्पियनसिप रद्द भएका कारण नेपालको जर्सी लगाउने अजितको सम्भावना तत्काल थाँती रह्यो ।
उमेर समूहमा भाग्यले साथ नदिए पनि २०७५ सालको अन्तिममा राष्ट्रिय टोलीका तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले कुवेत भ्रमणका लागि घोषित २३ सदस्यीय टोलीमा अजितलाई स्थान दिएका थिए । कुवेतविरुद्ध खेलेका दुईमध्ये पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अजितले पहिलो रोजाइबाटै खेल्ने मौका पाए ।
प्रशिक्षकले आफूमाथि गरेको विश्वासमा खरो उत्रिएका अजितले दोस्रो खेलमा पनि मौका पाए । तर, दोस्रो खेल दौरान खुट्टा भाँचिएपछि उनले तीन महिना मैदानबाहिर बिताउनुपर्यो ।
‘खुट्टा भाँचिएपछि अब खेल्न सक्दिनँ भन्ने लागेको थियो । तर प्रशिक्षक (कालिन) ले निको हुन्छ, हरेस नखाऊ, फेरि खेल्न सक्छौं भनेर हौस्याउनुभयो । राष्ट्रिय टोलीका फिजियोथेरापिस्ट आविष्कार पुडासैनीले धेरै सहयोग गर्नुभयो । त्यही कारण चाँडै निको भएर मैदान फर्किएँ,’ अजित त्यो पीडा सम्झन्छन् ।
कालिनको कार्यकालमा नेपालले ११ अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो । कालिनका प्रिय अजितले त्यसमध्ये सबैजसो खेल पहिलो रोजाइबाटै खेले । तर, गत वर्ष दशरथ रंगशालामा नेपालले थ्री नेसन्स कपको उपाधि जित्दाको फाइनलपछि अजित राष्ट्रिय टोलीमा देखिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय टोलीका वर्तमान मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको रणनीतिमा पर्न नसकेका अजितको लक्ष्य अहिले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन जनाउनु हो । त्यसका लागि उनीसामु जारी लिग र मोफसलका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुको विकल्प छैन ।
‘अबको ध्यान नै राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन जनाउनुमा हुनेछ । सधैँ राम्रै खेलिरहेको छु जस्तो लाग्छ । मेरो गल्तीमा पुलिसले गोल खाएको छैन,’ अब्दुल्लाहको मन जित्ने प्रयासमा रहेका अजित भन्छन्, ‘सबै प्रशिक्षकसँग आफ्नो योजना हुन्छ । सायद म अहिले प्रशिक्षकको योजनामा पर्न सकेको छैन होला । तर, त्यसका लागि म मैदानमा आफूलाई प्रमाणित गरेर उहाँको योजनामा पर्ने प्रयास हुनेछु ।’